Izikhangiso Zesixhumanisi Sombhalo Zilahla ama-Adsense eGoogle (kubhulogi lami) | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 3, i-2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Google AdSense bekulokhu kuyindlela eyinhloko yemali yokukhangisa kubhulogi yami kusukela yaqala ukusebenza. Nami nginakho Commission Junction izikhangiso ekuphakeleni kwami ​​kwe-RSS, I-Kontera ukukhangisa kokuqukethwe kokuthunyelwe kwami, futhi Izikhangiso Zesixhumanisi Sombhalo. Ngiphinde ngenze ukubuyekeza ngokusebenzisa Ngibuyekeze futhi uthole ngezikhathi ezithile Starbucks umnikelo nge-PayPal. Hawu!
Ngenyanga enhle, ngingahle ngilahle phansi ama- $ 300, kude ne $ 10k + ukuthi uJohn Chow kudonsela phansi, kepha kuhlonipheke ngombono wami. Uzobona ukuthi ikhasi lami lasekhaya cishe lihlanzekile kukho konke ukukhangisa. Ngingafaka izikhangiso kuyo yonke indawo kuyo, kepha angifuni ukusunduza izikhangiso kubavakashi ababuyela kusayithi lami njalo. Esikhundleni salokho, ngisebenzisa izikhangiso zabantu okwenzeka ukungithola ngokungaqondile, ngosesho nezinkomba.
I-Google Adsense bekungumthombo wami omkhulu wemali kuze kube manje. Izikhangiso Zesixhumanisi Sombhalo idilize ngokusemthethweni imali yami engenayo yakwaGoogle Adsense, sekwedlule isikhathi. NgoMeyi, ngenza amadola ambalwa. NgoJuni, ngifanise imali engenayo ebekunikezwa i-Adsense - kepha bengingenayo I-Google Adsense ithuthukisiwe. Kepha ngoJulayi, ngimi ukuletha imali ephindwe kabili ngeZikhangiso ze-Text Link kune-Adsense. Hewu.
Isihluthulelo Izikhangiso Zesixhumanisi Sombhalo impumelelo ukuthi yakhelwe ibhulogi, hhayi iwebhusayithi. Banikeze ne-plugin yabasebenzisi be-WordPress ukwenza kube lula nakakhulu. Abakhangisi bangathenga 'okuthunyelwe' kunamazwi. Lokho kulula okulula, kubo bobabili i-blogger nomkhangisi. Uma ubhala okuthunyelwe esihlokweni esithile, akumangalisi yini ukuthi ungathenga isihloko owaziyo ukuthi usekela umkhiqizo wakho? Ithuba elihle kakhulu.
Jul 7, 2007 ku-1: 47 AM
Isayithi lami selinezinyanga ezi-3 likhona, kepha lihlale phakathi kwezibuyekezo ze-Google PageRank. Ingabe kunenzuzo ukufaka isicelo se-akhawunti yomshicileli, noma kufanele ngilinde kuze kube yisibuyekezo esilandelayo seGoogle PageRank?
Ngizwile ukuthi i-TLA iphinda ihlole amasayithi angavunyelwe ekuqaleni, kepha ngizwe nokuthi inqubo ingathatha i- ngempela isikhathi eside.
Jul 7, 2007 ku-10: 23 AM
Ngokweqiniso bengingeke ngikhokhele i-akhawunti yomshicileli, bengizolinda. Okwamanje, ungasebenzisaAbaphathi beWebhu beGoogle ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho lihlelekile. Yebo ku-TLA kepha anginasiqiniseko ngomugqa wesikhathi. Ngikufundile lokhu okuthunyelwe lapho i-blogger ivunyelwe isiza sayo. Kuyindida ukuthi empeleni wayengatholi isiminyaminya ayesidinga ukwenza imali enhle. Ngangigxila ekushayeleni ithrafikhi eningi. Ngikuthanda ukukwenza ngokuqhuma kokuphawula kwamanye amabhulogi engingakaze ngiwavakashele. Nginezela engxoxweni, angisho nje ukuthi 'hey!'. Ngicabanga ukuthi ama-blogger amaningi avakashela abahlaziyi bawo. Thola leyo traffic futhi konke kuzolandela!
Jul 12, 2007 ku-6: 43 AM
Ngafaka isicelo se-TLA ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kepha angizange ngivunyelwe. Qagela ukuthi iwebhusayithi yami ayikhiqizi ithrafikhi eyanele noma inababhalisile abanele be-Feedburner. Angiqiniseki ukuthi yiziphi izindlela abazisebenzisayo ngenqubo yokuvunywa?
Nov 17, 2009 ngo-12: 32 PM
Angicabangi ukuthi ababhalisile be-feedburner ngenye yezinqubo, nginababhalisile abayi-6 futhi ngangena :).
I-pagerank yami ingu-4, ngakho-ke mhlawumbe yingakho ngingenile…
Ingabe othile unombono wokuthi ungasebenzisa i-TLA ne-google adsense ndawonye?
Jul 13, 2007 ngo-12: 05 PM
Izeluleko ezinhle muva nje kwezokukhangisa. Ngicabanga ukufaka amawebhusayithi ambalwa ahlukile futhi ngihlole amanzi ngokukhangisa.
Okthoba 14, 2007 ngo-10: 39 AM
Siyabonga ngamathiphu wakho awusizo kakhulu. Ungangitshela ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa i-TLA ne-Adsense kuwebhusayithi efanayo? akumelene ne-Google TOS? Ngiyabonga!
I-Oct 14, i-2007 ku-5: i-34 PM
Akuphikisana neGoogle TOS ukusebenzisa ezinye izinsiza zokukhangisa. Eqinisweni, uzothola amabhulogi amaningi anengeniso ejwayelekile esebenzisa imithombo eminingi.
Nov 19, 2009 ngo-1: 59 PM
Ngisanda kuqala ukusebenzisa izikhangiso zokuxhumanisa umbhalo, ngizobona ukuthi izinto ziphuma kanjani!